Thwebula MiniTool Power Data Recovery 8.8 – Vessoft
WindowsUhleloIsipele nokubuyiselaMiniTool Power Data Recovery
Ikhasi elisemthethweni: MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Recovery – an lula ukusebenzisa isofthiwe alulame idatha. Isofthiwe kwenza ukuba alulame isusiwe, ezilimele noma amafayela bese disk ngodonga okuyinto ukwehluleka kubangelwa ithonya izici ezihlukahlukene elahlekile. MiniTool Power Data Recovery isekela inqwaba ye hard drive, kanye ifayela izinhlelo wezinhlobo ezihlukahlukene. Futhi isofthiwe ikuvumela ukuba abuyisele idatha kwi amakhadi inkumbulo, oshayelayo optical, amadivayisi digital kanye nezinye izinto ezithwala ulwazi. MiniTool Power Data Recovery has a esibonakalayo elula futhi enembile.
Kuletha amafayela kanye disk ngodonga
Different scann izindlela
Data alulame on abathwali ahlukahlukene idatha
An interface enembile
Thwebula MiniTool Power Data Recovery
I-MiniTool Partition Wizard – imenenja enamandla yomsebenzi osezingeni eligcwele ngokushayela kanzima. Isoftware ifaka iqoqo lamathuluzi womsebenzi olula nezinhlobo ezahlukene zokushayela.
Amazwana ku MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Recovery software ehlobene
I-Exiland Backup Professional – isofthiwe yakhelwe ukwenza isipele idatha emithonjeni yasendaweni noma yangaphandle ngokusebenzisa izindlela ezahlukahlukene futhi ukhethe isigaba sokuncindezelwa kwesipele.
I-Comodo Uninstaller – okungafuneki kususa izinhlelo ezinjengeComodo Antivirus, iComodo Internet Security neComodo Firewall kufaka phakathi izinsalela zamafayela nokufakwa kwerejista.
Ithuluzi Lokususa le-eScan – isisetshenziswa senzelwe ukukhipha ngokuphelele imikhiqizo ye-antivirus ye-eScan ohlelweni. Isoftware isusa konke ukulandelwa kwe-antivirus efana namafayili asele nokufakiwe kwerejista.
Le software inesethi enkulu yamathuluzi wokwandisa uhlelo futhi ngokuvamile ithuthukisa ukusebenza kwayo ngezindlela ezihlukahlukene.
Isofthiwe yakhelwe ukuhlanza iPhone ne-iPad kusukela amafayela esikhashana, yenqolobane yohlelo lokusebenza, amakhukhi, amafayela nabo, shayela umlando nenye idatha ezingadingekile.
I-MeGAsync – isofthiwe yokuvumelanisa idatha yosayizi abahlukahlukene namafomethi ngesitoreji samafu se-MEGA. Isoftware ibethela ngokuthembekile amafayela ngesikhathi sokuhambisa.